अभिनेता पल र दुर्गेशले लगाए संगै भाईटिका ! | सुदुरपश्चिम खबर
अभिनेता पल र दुर्गेशले लगाए संगै भाईटिका !
आज तिहारको पाँचौं तथा अन्तिम दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथी( भाइटिका । दाजुभाईलाई दिदीबहिनीले सप्तरङ्गी टिका लगाईदिने भएकाले यस दिनलाई भाईटिका भनिएको हो । विशेषगरी दिदीबहिनीले दाजुभाईको दिर्घायूको कामना गर्दै यो चाड मनाईन्छ ।
यस्तैमा नेपाली सेलिब्रेटिहरुले पनि कोरोनाको कहर बिच भाईटिका हर्सोल्लासपुर्ण रुपमा मनाएका छन् । अभिनेता पल शाह र गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाले संगै भाईटिका लगाएका छन् । पल र दुर्गेश केही समयदेखी गहिरो दोस्तिमा छन् ।
भाईटिकाले दाजुभाई र दिदीबहिनी बिचको प्रेममय सम्बन्धलाई रंगहरु जस्तै सँधै गाढा, ताजा र प्रज्वल बनाईराख्ने विश्वास गरिन्छ । कलाकारहरुले पनि सप्तरङ्गी टीकामा रङ्गिविरङ्गी रुपमा तिहारलाई मनाएका छन् ।
यो पनिः दही स्वास्थ्यका लागि राम्रो खुराक मानिन्छ । यो दुधभन्दा पनिब बढी फाइदाजनक हुन्छ । यसमा प्रोटिन, क्यालसियम, भिटामिन–बी जस्ता पोषक तत्वहरु हुन्छन् । यसलाई खानाले शरीरलाई लाभदायक गर्छ ।
हरेक दिन यसको सेवन गर्नाले अपच, कब्जियत, ग्यास जस्ता समस्याहरु हल हुने गर्छ । भान्छामा कहिलकाँही धेरै मसालेदार खाना पाक्छन् । केही मसालामा दही मिलाएर खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न फाइदा हुने गर्छ । कालो मरिच हरेक घरमा प्रयोग गरिन्छ ।
एक कटौरा दहीमा १ चम्चा कालो मरिच मिलाएर खाने गरेमा शरिरमा रहेको बोसो कम हुन थाल्छ । केही मानिसहरु तौल कम भएका कारण टेन्सन लिन्छन् । यसका लागि दैनिक ड्राइफुडमा दही हालेर खानाले शरिरमा वजन बढ्छ ।
खाना पचाउन गाह्रो भएको छ भने पिनेको जिरामा दही हालेर खानुहोस् पाचन प्रक्रियामा सुधार हुन्छ । मुखमा छाला गएर समस्यामा पर्नु भएको छ भने दहीमा मह हालेर खाने गर्नुहोस् । दुई तिन दिनमा नै निको हुन्छ मुखमा जाने समस्या । (gnewsnepal.com बाट साभार )
भारत र अस्ट्रेलियाबीचको दोस्रो एकदिवसीय खेलमा क्रिकेटप्रेमीको एक जोडीले सबैको ध्यान खिचेका छन्। सिड्नी रंगशालामा खेल हेर्न पुगेका एक भारतीय समर्थकले आफ्नी अस्ट्रेलियन प्रेमिकालाई...
भारी गहना नलगाउनुहोस्ः साडी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने भारी गहना लगाउने गल्ती नगर्नुहोस् किनभने यस्तो गर्दा तपाईंको लुक बिग्रन सक्छ। ब्लाउजको फिटिङः साडीको रङसँग मेल नखाने ब्लाउज लगाउँदै...
आकाशबाट देखिएको लिङ्गा धाम (फोटो पिचर)
आकाशबाट देखिएको वेदकोट ताल (फोटो पिचर)
दोस्रो बैँस किन चढ्छ ४० बर्ष नाघेपछि महिलाहरुमा ?
बुडापाकाहरु को एउटा पुरानो भनाई गाउघरमा सुनिरहनु भएकै छ होला नि, चालिसे लागेछ बैस जागेछ । यो उखान पहिलेको बुडापाकाहरुले भन्ने गरेका हुन् ।...
बुढा र बुढीको कथा
Nawaraj Kalauni बुढा र बुढीको कथा पहाडको कुनै एक गाउँमा दुई जना बुढाबुढी बस्ने हुन्छ्न। उनिहरुका...
दम्पतीहरुबीच कस्तो अवस्थामा शारीरिक सम्बन्ध बनाउन हुँदैन ?
कस्तो अवस्थामा शारीरिक सम्बन्ध बनाउन हुँदैन ? यौन एक शारीरिक क्रिया भएपनि यसमा मानसिक तयारी र उपस्थिती अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले यौन सम्बन्धका लागि श्रीमान...
नारीका यी स्वभावले बिग्रन्छ घर परिवार, बन्छ जीवन नर्कसमान
भनिन्छ, कुनैपनि घरको सौभाग्य भनेको नारी हो। असल नारी घरमा छिन् भने त्यो घर स्वर्गसमान हुन्छ।तर, दुष्ट नारी भएको घर सँधै झगडाको अखडा बन्छ।...